Luxury-Brand new Apartment, ebekwe entliziyweni ye Miraflores, eyona ndawo inokhenketho eLima, jonga w/balcony. Igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1.5. Indawo yokuhlala, ikhitshi exhobe ngokupheleleyo, izixhobo zombane, iitawuli kunye neelinen.
Ukucoceka kwemihla ngemihla
Ijimu, itafile yepool, indawo yeBBQ (ugcino luyafuneka) indawo yetv.
Izithuba ezabelwana ngazo ziindawo eziqhelekileyo kwi-1st kunye ne-24th floor - Espacios compartidos son las iindawo comunes en 1er y ultimo piso.
Le yiyunithi yekona enebalcony entle ejonge echibini le-2.
Igumbi lokulala eli-1 elibanzi elineemitha ezingama-70 zesikwere, igumbi lokuhlala eli-Nice elineBalcony, i-Smart Tv enkulu enentambo yeSiseko (iitshaneli zelizwe), Ifowuni kunye nesantya esiphezulu se-intanethi, Igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izixhobo ozifunayo.
Igumbi lokuhlambela eli-1 kwindawo yokuhlala.
Igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela eline-ensuite, amanzi ashushu iiyure ezingama-24, kunye negumbi elikhulu lokuhamba, i-Iron kunye neehangers.
Ikhaya elipheleleyo lokonwabela iLima.
Isakhiwo simi ngaphaya kwePardo Avenue, edume kwaye intle ipoplar grove eMiraflores
Indawo egqibeleleyo eMiraflores! Ibhloko e-1 esuka kwiSupermarket yaseVivanda, iibhloko ezi-2 ezisuka kwiFamous "LA TRANQUERA" yokutyela, iibhloko nje ezi-5 ukusuka eParque Kennedy, iibhloko ezisuka eOvalo de Miraflores, ecaleni kweDoubletree Hilton. , iibhloko ezivela kwiSaga Falabella
Izitshixo ziya kuba phambi kwedesika phantsi kwegama lakho, sinomnyango 24hrs, ukujonga kwakho ngexesha.inokwenzeka 24hrs!
Ihlala ikhona 24/7, apha kwi-airbnb okanye i-whasap yam +51985/639676
Ndihlala ndivulekile ukunceda undwendwe lwam nanini na! I-24hours, andihlali kwisakhiwo, kodwa ndihlala kufuphi, ndiya kuvuya ngakumbi ukunceda iindwendwe zam,
Ihlala ikhona 24/7, apha kwi-airbnb okanye i-whasap…